Ukukhupha ... Ngelo hlobo lwenkunkuma engenakuyifundela kungekudala kwaye akafumananga ukuthandwa okwaneleyo - kakuhle, yintoni le yokucima? Uhlobo luni loshishino lokuguqula amapapu? Ngoko, i-trifle eyinqaba, engenanto ibaluleke kakhulu ... Kuze kube yilapho ubona ukuba abo bazama ukufezekisa ekusebenzeni kwalo mkhono bakha kwaye musa ukumangaliswa!
Kunzima ukukholelwa ukuba le mveliso yenziwe ngamacwecwe amaphepha! Kwaye ukwenza ukuba, kuvela, unokwenza okuninzi, kwaye ubugcisa bubuhle bezinto ezingavamile. Ewe, ezi zinto azikwazi ukubizwa ngokuba luncedo kubutyebi, abanalo nto ebalulekileyo, kodwa ngaba luncedo kuphela ... luncedo? Ngaba akukho nziselwa i-gizmos eyenziwe kwindlela yokwenza i-voluminous quilling, okwenziwe yintsipho kwaye ingenangqiqo ebonakala ngathi idlula kwixabiso lezinto zokomoya?
Yintoni enomdla kwaye iluncedo ekuhlaleni kwaye yintoni na? Ukutshintshwa ngokwemvelaphi kweepanele zamaphepha ... yonke into, nantoni na! Ngoku oku kufundiswa kweso sikolo, kwaye kuya kuba luncedo kuwo wonke umntu ukuba akwenze. Ewe, akusiwo wonke umntu othanda imfesholo, kungekhona wonke umntu onokufunda ukudibanisa, ukugcoba, ukukhwela, kwaye akusiyo wonke umntu okhanga kuyo. Kodwa wonk 'ubani unxanelwe ukudala, yintoni eyenza ukuhlaziywa kwenzelwe le nto! Awudingi iimpahla ezibiza kakhulu, awudingi ixesha elininzi kunye neendawo, izixhobo kunye nezixhobo - nje iimpapa zephepha, umnqweno kunye nokucinga!
Kwaye umntu unokujonga kuphela oko abantu abakwenzayo kulephepha - i-lace, iimveliso ze-filigree, amathoyizi, iimbulelo, amaqanda e-Easter, izimbali zeentyatyambo, iibhokisi ze-lace, i-vases kunye ne-gizmos engaphezulu. bawazisa iwashi! Kwaye into eyinqaba kukuba abo badala oku, baqinisekisa ukuba oku kwenziwa ngokukhawuleza kwaye ngokukhawuleza, kungekudala nje, kutholakala kuwo wonke umntu ...
Akunjalo - kulula - ewe, kodwa akulula. Okokuqala kufuneka usebenze ngokubhukuda kweemichilo, wenze iipascards ezimbalwa, kunye nabantwana abaqaphele ukuba babhekane nayo, kwaye bathathe imveliso emithathu, umzekelo, yenza ikhekethi.
Ngoko, yintoni okufuneka uyenze ukukhupha ivolumu?
Ukufakwa kwephepha, u-3-10 mm ububanzi. Zithengiswa, kodwa ezinye zizenza zivela kwiphepha eliqhelekileyo lokubhala, zinqunywe "kumatshini" wokubhala umatshini wokuvuselelwa kwamaxwebhu.
Ukuguqula iikhephe zikho ikhefu ekhethekileyo, kodwa abaninzi basebenzisa inaliti enqabileyo okanye i-toothpick yesiqhelo engaqhekekiweyo ekupheleni komgca ukugcina umgca webhebhoni.
Gweba ummese onqabileyo.
Umlawuli eneemingxube zeeramitha ezahlukeneyo zokulinganisa iipiliti ezigqityiweyo. Kodwa oku akuyimfuneko, unokwazi ukutshintsha iitemplates eziliqela zamateyipu anesigxina ngaphambi kokuba uqale ukusebenza, kodwa ziya kukhonza njengeemodeli, ziyakusayinwa.
Kwaye ngoku unokuqala ukwenza into yokuqala yezinto ezintathu! Kungcono ukuba ungaqalanga ngomkhiqizo ovulekileyo, kodwa ngeentsimbi ezininzi, izandla zifuna "ukutyekela." Indlela oza kwenziwa ngayo umfanekiso, apho iifowuni kunye nekhanda lakho liza kubakho, ungacinga kwangaphambili, kodwa ngokuphindaphindiweyo iinkcukacha ziza kuqala ngexesha lomsebenzi.
Siqala ukusuka ngaphantsi - sibeka ipateni kwaye siyifake ngokulula kwibhodi - ukuze silungise kwaye singavumeli umsebenzi ukuba "uhambe" etafileni. Emva koko, siqala ukwenza iindonga zebhokisi - silinganisa ubungakanani benxalenye kunye nokuba bangaphi babo abayidingayo kwaye sibamba uluhlu lweekhalenda eziphosakeleyo ngasecaleni, banika isimo esifanelekileyo. Akukho "iipateni" azikho, inkosi ngokuqhelekileyo ayiyi kukwazi ukuphinda imveliso yakhe. Yonke into incike kwintetho, ingcinga kunye nokuqonda. Kodwa usadinga ukubona imisebenzi esekugqityiweyo-baya kukhuthaza iingcamango zemidwebo kunye neefom.
Umveliso ogqityiweyo ushiywe endaweni kude kubekho i-glue iyomile ngokupheleleyo, kwaye ngokukhawuleza utyunwe ngommese ukucima ibhodi.
Imveliso, efana ne-airy ebonakalayo, inamandla kakhulu, ii-caskets zingasetyenziselwa injongo yazo-ukugcina amawaka ezincinane. Ukuze bakhonze ixesha elide kwaye banamandla amakhulu banokugutywa nge-aerosol acrylic lacquer okanye i-hair spray eqhelekileyo, okanye unokuqala "isilivere" ngepeyinti ye-aerosol - kuya kuba kuhle!
Njengoko ubona, akukho nto ilukhuni, i-jeweler enkulu, umdwebi okanye umculi ukuba enze ubuhle obungenasiphelo, akunjalo. Ihlabathi lihle kangaka, kwaye aliyi kulugcina, kodwa uxolo ekhaya lakho nasemphefumlweni kufuneka!
Ukupheka insipho yemvelo kumntwana?
I-Origami inamba enezandla
Ukukhethwa kweqhumiso kuxhomekeke kumnandi weoli efunekayo
Yenza okanye ungagonyanga: U-Xenia Borodina wenza ingcambu kwiWebhu
I-Cappacci nge jamisi ye-raspberry kunye ne-icon icing
IsiGaba seKlasi: Ukugaya
Isidlo ngeesame kunye neziqholo
Isaladi ye-Olivier nenkukhu
I-Keratin unyango lweenwele
Ziziphi iikhondom ezilondolozayo?
Khulisa inja kwijaji
Yimaphi abantu abahle kakhulu?
Yongeza i-romance ubudlelwane bemihla ngemihla